Njirimara, nhazi, ụdị ndụ dị iche iche na iyi egwu nke Osimiri Nwụrụ Anwụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu n'ime osimiri a kacha mara amara n'ụwa niile bụ nke a Oke Osimiri Nwụrụ Anwụ. Ọ bụ ama maka ọtụtụ ihe. Nke mbụ bụ nnu dị ukwuu. Nke a putara na ndu n’ime mmiri ya apughi itolite ma nwekwaa mmasị na ihe ndi ozo nwere ike ise n’elu ya. A na-akpọkarị ya dị ka a na-akpọ ya n'ọtụtụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ. Ọ bụ ezie na a na-akpọ ya aha oké osimiri, ọ bụ ọdọ mmiri endorheic nke na-enweghị ụdị ọpụpụ ọ bụla.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, njirisi ala na ọchịchọ ịmata ihe nke Osimiri Nwụrụ Anwụ.
2 Nguzobe nke osimiri nwụrụ anwụ
3 Di iche iche nke Osimiri Nwụrụ Anwụ
Oke Osimiri Nwụrụ Anwụ bụ ọdọ mmiri endorheic nke ala gbara gburugburu kpamkpam na enweghị ụdị ọpụpụ site na mmiri gaa oghere oghere. Nke ahụ bụ ịsị, Ọ bụ ọdọ hypersaline nwere oke nnu dị elu karịa ụdị osimiri ma ọ bụ oke osimiri ọ bụla. Ọ dị na oke Jọdan, Israel na West Bank. Ọ dị na omimi nke ihe dịka mita 400 n'okpuru oke osimiri. Nke a nwere ike ịbụ otu n'ime ihe mere o ji nwee oke nnu.
Ọ bụrụ na anyị elee ya anya site n’echiche, anyị pụrụ ịhụ na Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ bụ otu n’ime ebe ndị kasị ala n’ụwa. Ọo ya bụ, ọ bụ ala kacha nwee mmiri n’ime mmiri niile. E kewara ya na efere mmiri abụọ nke otu àkwà mmiri na-ekewa. N'ozuzu ha, ha na-anọdụ na ịda mbà n'obi nke mgbawa ma ọ bụ mmejọ a maara dị ka Ndagwurugwu Jọdan. Nke a dị n'etiti Ugwu Judea na Transjordan Plateau
Akụkụ ebe ugwu Osimiri Nwụrụ Anwụ bụ nke kasị ukwuu na nke kasị mie emi. TO nwere ogologo nke ihe dị ka kilomita 50 ma ruru mita 400 na omimi. Ugwu a dị na ndịda, n’aka nke ọzọ, dị naanị kilomita iri na otu n’ogologo na naanị 11 mita na omimi. Nanị osimiri na-asọba n’ọdọ mmiri a bụ Osimiri Jọdan. Ọ bụ naanị otu mmiri na-aga n'ihu nke mmiri a nwere. Ọ na-ewepụtakarị nnukwu mmiri dị ọcha, ọkachasị n’ebe ugwu ugwu.
N'ebe ndịda, a na-azụkarị ya mmiri site n'ọtụtụ iyi. Mana ọbụghị nnukwu onyinye. Nke a pụtara na ọkwa nke Osimiri Nwụrụ Anwụ adịghị agbanwe agbanwe n'ime afọ. Nnukwu nnu ha nwere ruru ụkpụrụ nke 340 grams kwa lita. Otu n’ime ihe na-akwalite nnu dị ukwuu bụ na oke mmiri dị mma ọ na-enweta pere mpe karịa mmiri a na-amịpụ.
N’okwu a, anyị nwere oke ikuku mmiri oke mmiri. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na ọ dị na mpaghara nwere oke okpomọkụ na obere mmiri ozuzo. Salts ndị dị na mmiri a bụ sodium chloride, magnesium chlorine, calcium chloride, potassium chloride, na magnesium bromide. Enwere ike ịsị na ihe dị ka 27% nke mmiri dị n'oké osimiri a bụ ihe siri ike.
Nguzobe nke osimiri nwụrụ anwụ
Dị ka anyị kwuru na mbụ, Osimiri Nwụrụ Anwụ dị na ndagwurugwu ndagwurugwu. Nke ahụ bụ, ọ bụ ịda mbà n’obi nke na-eme ka mmejọ ndị dị na ibe ha. Nmehie a gbasara n’afrị tektikal Africa na Arabian niile. Tutu amua olulu a, Oke Osimiri Mediterenian sara mbara karịa ugbu a. Ọ bịara ogide niile ụzọ na Palestine n'oge oge jurassic na Ugochukwu. Otú ọ dị, na Miocene efere Arebia mebiri n'akụkụ ugwu nke efere Eurasia. Otu a ka ụwa si bulite ma bụrụ ugwu ugwu Palestine. Nke nta nke nta, n’ime afọ ndị gafeworonụ, e jiri nwayọọ nwayọọ kpụọ ndagwurugwu ndị ahụ a warawara wee jupụta na mmiri oké osimiri.
Ugbua na Pleistocene, e nwere nnukwu ala n'etiti etiti Mediterenian na ndagwurugwu ahụ nke etolitere n'ihi mgbape dị n'etiti efere tectonic. O kwere omume iweli ọtụtụ mita ruo mgbe a gapụrụ mmiri mmiri. Nke a mere ka olulu na mmiri kewaa iche. Azụpụrụ Ọzara Aqaba.
Di iche iche nke Osimiri Nwụrụ Anwụ
Dika anyi kwuburu na mbu, nnu nnu nke Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ dị oke elu. Ọ na-aghọ ihe dịka 10 ugboro nnu nnu nke oke osimiri. Nke a na - eme ka ọ bụrụ ọzara mmiri nke naanị ụfọdụ ndị dị ndụ nwere ike ibi na ya. Naanị ihe ndị dị ndụ nwere ike ịnwụ na ọnọdụ ndị a jọgburu onwe ha bụ nje bacteria, protozoa, na algae nwere mkpụrụ ndụ.
Imirikiti algae a sitere na genus Dunaliella. Agbanyeghị, n'akụkụ oke osimiri dum nke Osimiri Nwụrụ Anwụ, anyị nwere ike ịchọta ụfọdụ osisi halophyte. Osisi ndị a bụ ndị a na-emegharị na ala nwere oke salinity ma ọ bụ alkalinity. Kama nke ahụ, anyị enweghị ike ịchọta ụdị azụ, anụ na-akpụ akpụ, amphibians na anụmanụ na-erughị obere. N'oge ụfọdụ, a na-adọkasị ụfọdụ azụ n'akụkụ mmiri nke osimiri ma mesịa nwụọ n'enweghị ohere ọ bụla nke ịlanarị.
Maka nke a, mmadụ enweghị ike ikwu maka ụdị ndụ dị iche iche mgbe anyị na-ekwu maka Osimiri Nwụrụ Anwụ. Agbanyeghị, ọ pụtaghị na oke osimiri a enweghị akụ dị oke ọnụ ahịa. N'ihi ọtụtụ nnu nnu ya, Enwere ike ịpụta nnu ya maka ebumnuche ọgwụgwọ. I nwekwara ike itinye apịtị nke dị n'oké osimiri n'elu ahụ ebe ọ nwere nnukwu ihe bara uru na mineral.
Agbanyeghi na oke oke osimiri a enweghi nsogbu site na ngbubiga azu karie, agbatịkwu ya na olu ya ebelatala n’ime iri afọ ndi gara aga. Ihe kpatara nke a bụ na mmiri a na-echegharị ihu na e nwere nnukwu onyinye enyemaka ala nke na-eme ka ụfọdụ ebe gburugburu gbaa. Kemgbe afọ 1960, mmiri e belatala. Nke a malitere ime mgbe Israel guzobere ebe a na-agbapụta mmanụ n’akụkụ Oké Osimiri Galili. Pumplọ ebe a na-agbapụta mmiri mere ka mmiri Osimiri Jọdan gaa na mba ndị ọzọ jiri ya nwee ike ịnye na ịgbara mmiri.
Site n’ịtụgharị nnukwu mmiri mmiri n’onye na-arụ ọrụ nke ọma na inwe oke mmiri, ọ na-eme ka mmiri dị n’oké osimiri a belata ma belata. Mmiri na-ebelata ihe dị ka mita 1 kwa afọ.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị kari muta ihe banyere Osimiri Nwụrụ Anwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oke osimiri nwụrụ anwụ